Franch Defense Minister Jean-Yves Le Drian speaks duringapress conference, in Paris, Saturday, Jan. 12, 2013. Le Drian said hundreds of French troops are involved in an operation that destroyedacommand center of Islamic rebels in Mali. (AP Photo/Thiba
မြန်မာနိုင်ငံက ပဋိပက္ခတွေ ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ ASEAN ကချမှတ်ထားတဲ့ အချက် ၅ ချက် ကို မြန်မာ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် အခြေ အနေတွေ တိုးတက်လာခြင်း မရှိဘူးလို့ ပြင်သစ် အစိုးရက ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားမှာ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မြန်မာ့အရေး ဆွေး နွေးခဲ့အပြီးမှာ ပြင်သစ်အစိုးရက အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အညီ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ကျူးလွန် နေတဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG ၊ CRPH အပါ၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အဖွဲ့တွေ အားလုံးပါဝင်တဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး တရပ် လုပ်ဆောင်ဖို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုတွေကြားက နောက်မတွန့်ဘဲ သတ္တိရှိစွာ ဒီမိုကရေစီ ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ထောက်ခံပါကြောင်းကိုလည်း ပြင်သစ်အစိုးရက ထပ်မံ အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
မန်မာ့အရေးအတွက် အာဆီယံမူ ၅ ချက်ကိုထောက်ခံကြောင်း ပြင်သစ်ထပ်မံအတည်ပြု
မွနျမာ့အရေးအတှကျ အာဆီယံ မူ ၅ ခကျြကို ပွငျသဈထောကျခံကွောငျး ထပျမံအတညျပွု
မွနျမာနိုငျငံက ပဋိပက်ခတှေ ကူညီဖွရှေငျးပေးဖို့ ASEAN ကခမြှတျထားတဲ့ အခကျြ ၅ ခကျြ ကို မွနျမာ အာဏာသိမျး စဈကောငျစီက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး မရှိတဲ့အတှကျ အခွေ အနတှေေ တိုးတကျလာခွငျး မရှိဘူးလို့ ပွငျသဈ အစိုးရက ပွဈတငျဝဖေနျလိုကျပါတယျ။
ဧပွီလ ၂၄ ရကျနကေ့ အငျဒိုနီးရှားမှာ အာဆီယံ ခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ မွနျမာ့အရေး ဆှေး နှေးခဲ့အပွီးမှာ ပွငျသဈအစိုးရက အခုလို ပွောဆိုလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မွနျမာ ပွညျသူတှရေဲ့ ဆန်ဒနဲ့အညီ အာဆီယံ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှရေဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ပဋိပက်ခဖွရှေငျးရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ နညျးလမျးတှကေို ထောကျခံသှားမှာဖွဈကွောငျး ပွငျသဈနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ ကွညောခကျြမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ အာဏာသိမျးစဈကောငျစီရဲ့ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့တှကေ ကြူးလှနျ နတေဲ့ အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျမှုတှကေို ခကျြခငျြး ရပျဆိုငျးပွီး အမြိုးသားညီညှတျရေး အစိုးရ NUG ၊ CRPH အပါ၊ ဒီမိုကရစေီလိုလားတဲ့ အဖှဲ့တှေ အားလုံးပါဝငျတဲ့ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေးရေး တရပျ လုပျဆောငျဖို့ဟာ မွနျမာနိုငျငံက ပဋိပက်ခတှေ အဆုံးသတျနိုငျဖို့ အတှကျအရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စဖွဈကွောငျးကိုလညျး ပွောဆိုထားပါတယျ။
ဖိနှိပျရကျစကျမှုတှကွေားက နောကျမတှနျ့ဘဲ သတ်တိရှိစှာ ဒီမိုကရစေီ ရေးအတှကျတိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ မွနျမာပွညျသူတှကေို ထောကျခံပါကွောငျးကိုလညျး ပွငျသဈအစိုးရက ထပျမံ အတညျပွုပွောဆိုပါတယျ။